शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान भइरहेको छ : प्रहरी – SidhaRekha
२०७४ मंसिर २१, बिहीबार ११:११ December 7, 2017
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहेका ४५ जिल्लामा शान्तिपूर्णरुपमा मतदान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुनै घटना भइहाले १० देखि ३० मिनेटभित्र जुनसुकै स्थानमा सुरक्षाकर्मी पुग्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा एक करोड २२ लाख ३५ हजार ५७८ मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् । – रासस
अघिल्लोआफ्नै सरकारलाई गगन थापाको प्रश्न- बम पड्काउदै हिँड्नेलाई छुट किन ?
पछिल्लोडा. सिके राउत पक्राउ